Alaab-qeybiyeyaasha iyo Warshada | China Concrete Mixer Reducer Truck Reducers
PMB 7.1R 130 Yareeyaha ee xamuulka isku dhafka la taaban karo
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Qaabka PMB6/PMB6.5/PMB7.1/PMB7.8/PMB8.0 waxa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca PMP, taxanaha PMB6/PMB6.5/PMB7.1/PMB7.8/PMB8.0. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib. Korontada dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto oo isku xidha isku-darka shubka ah ee xirfadlaha ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenada taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka P4300 waxaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo nooca ZF P4300 asalka ah. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tan asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira mashiinka shubka ah ee xirfadleyda ah Awoodda dareeraha ah waa khabiir koronto biyo ah oo isku-dhafan isku-darka shubka ah ee xirfad-yaqaanka ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenka ee taageeraya, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. PMB7.5, PMP7.5sp model waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo asalka ZF PMB7.5, PMP7.5sp model. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tan asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira mashiinka shubka ah ee xirfadleyda ah Awoodda dareeraha ah waa khabiir koronto biyo ah oo isku-dhafan isku-darka shubka ah ee xirfad-yaqaanka ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenka ee taageeraya, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka P3301 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca ZF P3301 asalka ah. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida midda asalka ah, qiimo tartan badan, gaarsiin degdeg ah, iyo adeegyada ugu wanaagsan ee iibka ka dib. Awoodda dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto koronto ah oo isku xira isku-darka shubka ah ee xirfadleyda ah (gaadiidka bamka) nidaamka hydraulic kaalmaynta, dayactirka iyo sahayda alaabta.
Baabuurka isku-dhafka la taaban karo ee PLM-9 yareeya PLM-7
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. PLM-7, PLM-9 model waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo ZF PLM-7, PLM-9 model. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib. Korontada dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto oo isku xidha isku-darka shubka ah ee xirfadlaha ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenada taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. 575L, 577L, 580L model waxa loo isticmaali karaa in lagu beddelo Bonfiglioli 575L, 577L, 580L model. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib. Korontada dareeraha ELEPHANT waa khabiir koronto oo isku xidha isku-darka shubka ah ee xirfadlaha ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenada taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.
Gaadhi isku-darka la taaban karo DD33 yaraye
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka DD33 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo asalka Daikin DD33-MF model yareeyaha iwm isku-darka shubka ah (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenka taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Qaabka TOP P90S waxaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo asalka TOP P58, P68, P75, P75R, P75S, P80, P90S, P90 reducer model iwm. Adeegyada iibka.ELEPHANT Fluid Power waa khabiir koronto oo isku xidha isku-darka shubka ah ee xirfada leh (gaadiidka bamka) nidaamka hawo-mareenada taageeridda, dayactirka iyo agabka agabka.
Dhismeeyaha waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. 2-6 cubic shubka isku-dhafka ah ee nooca xamuulka ah waxaa loo isticmaali karaa si loogu beddelo taxanaha ZF P3301, P4300, P5300, PLM7, PLM9 model iwm. adeegyada.